I-Topiramate powder (97240-79-4) hplc =98% | I-AASraw Fat ilahlekile
/ iimveliso / abanye / Umgubo ophezulu we-powder
Akukho kalo SKU: 97240-79-4. Udidi: abanye
Ifomula yeMolekyuli: C12H21NO8S
Ubunzima Ezinto: 339.36
Ukuxhuzula kungenxa yesenzo esingaqhelekanga ("ukudubula") semithambo-luvo kwingqondo, kwaye umsebenzi ongaqhelekanga usasazeka kwiindawo ezincinci okanye ezinkulu kwingqondo. Nangona indlela yokwenza isenzo se-Topiramate powder ayaziwa, izifundo zesayensi zibonisa ukuba inokutshintsha ii-neurotransmitters ngaphakathi kwengqondo. I-Neurotransmitters ziikhemikhali ezenziwa yimithambo-luvo kwaye zisetyenziselwe ukunxibelelana nezinye iintsholongwane ezikufuphi. Ngokutshintsha imveliso okanye isenzo se-neurotransmitters, i-Topiramate powder ingacinezela umsebenzi ongaqhelekanga wemithambo-luvo kwingqondo ebangela ukuxhuzula okanye inokuthintela isenzo esingaqhelekanga ukusasazeka kwezinye iintlambo. Olunye uphononongo lubonisa ukuba i-Topiramate powder ingayicinezela imithambo-luvo ngokuthe ngqo (okt, hayi ngokutshintsha ii-neurotransmitters) kwaye ibenze banciphe umlilo.
Landela izikhokelo zikagqirha. Tsalela umnxeba ukuba unemibuzo. Ngokwesiqhelo, ugqirha wakho uya kukuxelela ukuba uqale ngokuthatha i-25-milligram ye-tablet amaxesha amabini ngosuku Emva kwethutyana, ugqirha unokunyusa ngokuthe ngcembe idosi ukuze afumane ulawulo olungcono lokubanjwa kwakho. Ngenxa yokuba i-Topiramate powder ithathwa ngokuphindwe kabini ngosuku, abantu abaninzi bazinceda ukuba bakhumbule ngokuthatha isidlo sakusasa kunye nesidlo sakusihlwa. Buza ugqirha ukuba wenzeni xa ulibale ukuthatha idosi.
Zombini ezi ntlobo zeTopamax zinokuthathwa ngokutya okanye ngaphandle kokutya, kodwa kungcono ukuba ungaguquguquki imihla ngemihla.
Lumka ukuba ugqirha ubhala iyeza elitsha usebenzisa uhlobo oluthile lwepilisi. Umzekelo, ukuba ubusebenzisa amacwecwe angama-25-mg kwaye iyeza elitsha lipilisi ze-100-mg, ulumke usebenzise inombolo echanekileyo. Sukuqhubeka ngokuzenzekelayo usebenzisa inani elifanayo leepilisi njengangaphambili. Qinisekisa ukuba uyazi ukuba loluphi ubungakanani bethebhulethi obumiselweyo.
Ukuba uthatha iipilisi, ginya nganye iphelele. Musa ukuluma. (Iya kuba krakra.)
Ukufafaza iifomsile yindlela elula yokunika i-Topamax kubantwana nakwabanye abanengxaki yokugwinya iipilisi. Iicapsule zinokuginywa ziphelele, kodwa zihlala zivulwa kwaye iziqulatho zifafazwa kwitispuni yokutya okuthambileyo njengeapilesauce, ikhastadi, ice cream, ihabile, ipudding, okanye iyogathi. Nantsi inkqubo:
Bamba icapsule ime nkqo ukuze ufunde igama elithi "TOP".
Nciphisa yonke imixholo yecapsule kukutya.
Gwinya yonke icephe kwangoko ngaphandle kokuyihlafuna. (Iya kungcamla ukuba krakra xa ihlafunwa.) Ukusela amanzi okanye olunye ulwelo ngoko nangoko kunokunceda uqinisekise ukuba konke ukutya kuginyiwe. Ungaze ugcine naliphi na iyeza elixutywe nokutya oza kulisebenzisa kamva.
I-Topiramate powder ingabangela ingozi kumntwana ongakazalwa, kodwa ukubanjwa ngexesha lokukhulelwa kunokulimaza umama kunye nosana. Tshela ugqirha wakho ngoko nangoko ukuba ukhulelwe ngelixa uthatha i-Topiramate powder ngenxa yokuxhuzula. Ungaqali okanye uyeke ukuthatha i-Topiramate powder ngexesha lokukhulelwa ngaphandle kwengcebiso kagqirha wakho.